lg अभिलेखागार - स्मार्टमे
ट्याग अभिलेखहरू: lg
डोम » "Lg" सँग ट्याग गरिएका प्रविष्टिहरू
एलजी यस वर्ष स्मार्टफोनको उत्पादन समाप्त गर्दछ
हालसालै मिडियामा देखा परेका सबै रिपोर्टहरु वास्तविकता संग मिल्दोजुल्दो छ। एलजी प्रतिनिधिहरूले भर्खरै घोषणा गरे कि स्मार्टफोनको उत्पादन छोड्ने निर्णय गरिएको छ। मोबाइल विभागले विशाल ल्यायो ...
भर्खरको LG एलट्राबुकहरू अब उपलब्ध छन्। तिनीहरू आफैं पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्दछन्
हाल सम्म, एलजी कम्प्युटरसँग नजिकबाट सम्बन्धित थिएन। अब, तथापि, यो परिवर्तन भएको छ र कम्पनीले २०२१ देखि भर्खरको अर्को जेनरेशन ल्यापटप प्रस्तुत गरेको छ। ल्यापटपहरू सान्त्वना, राम्रो प्रदर्शन र ...
LG स्टाइलर - एक वार्डरोब महामारीको लागि बनाईएको छ
lg, LG स्टाइलर, स्मार्ट घर उपकरणहरू, वार्डरोब
मार्च २०२० फिर्ता जाऊँ, जब महामारी शुरू भयो। हामी मध्ये कसले हताश भई त्यस समयमा हाम्रो हातहरू कीटाणुरहित गरेनौं? सबै डिकोन्टेमिनेट गर्ने बारेमा कति मेम्स छन्? कार। ढोका ह्यान्डल गर्दछ। गलाहरु म सम्झन्छु ...
एलजीले फोल्ड आईफोनका लागि स्क्रीनमा काम सुरु गरेको छ
स्याऊ, iphone, lg
हालसालै, त्यहाँ फोल्डेबल आईफोनहरूको बारेमा थप रिपोर्टहरू छन्। डिजीटाइम्सका अनुसार, एलजी स्क्रीनमा विकासको लागि जिम्मेवार हुनेछ जुन फोल्ड आईफोनहरूमा देखा पर्दछ। एलजी ले फोल्डेबल आईफोन पोडका लागि स्क्रीनहरूको ख्याल राख्छ ...
समाचार, स्मार्ट होम
एलजी पारदर्शी प्रदर्शन अधिकांश शहरहरूमा जान्छ?
lg, स्मार्ट घर, प्रदर्शन
एलजी भर्खरै धेरै नवीन विचारहरूको साथ आएको छ। ती मध्ये एउटा प्रस्ताव यो छ कि स्मार्ट शहरहरूको भविष्य पारदर्शी OLED डिस्प्लेमा आधारित हुनुपर्दछ। शुरुवातकर्ताहरू, रेस्टुरेन्टहरूको लागि? एलजी पारदर्शी OLED डिस्प्ले प्रयोग गर्ने इरादा राख्छ, अन्यमा ...
Airplay2 अब पुरानो LG TV मा उपलब्ध छ!
स्याऊ, lg, टेलिभिजन
एप्पलको टेक्नोलोजी वायरलेसका लागि - एयरप्ले २ छवि ट्रान्सफर पुराना एलजी मोडेलहरूमा जान्छ! LG ले आफ्नो वचन राख्दछ! एलजी प्रतिनिधिहरूले भने कि उनीहरूको टिभीहरू वसन्त २०२० मा पहिले नै एयरप्ले २ प्रविधिमा सुसज्जित हुनेछन्। दुर्भाग्यवस, ...
एलजी कोरोनाभाइरससँग लड्न रोबोटमा काम गर्दैछ
एलजी कोरोनाभाइरससँग लड्ने कम्पनीहरूमा सामेल हुन्छ। साम, मेरो समयमा, मैले एलजीबाट मास्क पाए। यद्यपि यो अन्त होइन। यस बर्षको सुरूमा, रोबोट बजारमा हिट गर्ने छ, जुन ठूलो कीटाणुशोधन गर्न डिजाइन गरिएको छ ...
CES 2021 -9मिनेटमा LG सम्मेलन
ces, यी 2021, lg
CES फिर्ता छ! परिवर्तित फारममा, तर अझै! हामी अत्यन्त खुसी छौं कि विश्वको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स मेला वर्षको सुरूमा हामीसँग फिर्ता आउँदछ र नयाँ प्रविधिहरू देखाउँदछ। हामी एलजी को साथ लेख को श्रृंखला शुरू गर्नेछौं! LG ...
LG WebOS 6.0 ले आफ्नो डेब्यू गर्दछ - TV सेट नाटकीय रूपमा परिवर्तन हुनेछ
lg, टेलिभिजन, tv
यस पटक एलजीले एक विकासको सट्टा एक क्रान्ति रोज्यो। LG WebOS 6.0 LG TVs को अपरेटिंग प्रणालीको सबैभन्दा नयाँ अपडेट हो, तर जे भए पनि सबैभन्दा ठूलो हो। के छ परिवर्तन हुनेछ? प्रयोगकर्ताको मुख्य स्क्रीन नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ ...